Disiki - Quotes Pedia
Isu tese tinoda kurudziro uye kurudziro kuti titore muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Kufunga uye tariro zvinotibatsira kutarira mberi uye zvinoita kuti tirambe tichifamba. Kukurudzira kunotibatsira kusimuka pachedu zvakanyanya uye kusangana nematambudziko takashinga. Izvo zvinotibetserawo kukurudzira uye kunzwira tsitsi vamwe vari kusangana nematambudziko muhupenyu hwavo.
Nzira huru yekuzvipa iwe inodikanwa yekukurudzira iri kuenda kuburikidza nehukuru hwekuunganidza inokurudzira uye yechokwadi makotesheni. Quotes anotungamira chaizvo kutaridzira uye kufadza mamiriro angave akaomarara uye akaoma kubata nawo. Kunyangwe kana zvinhu zvanyatsonaka, chirevo chinonzwisisika chinokudzidzisa kuti ubate mufaro wako kwazvo uye uve nekutenda nezvatinazvo.
Quotespedia.org inzvimbo yakanaka yekutsvaga yezvitorao zvinofadza kufamba kwega kwehupenyu. Iine muunganidzwa wemakotesheni nevanhu kubva mukufamba kwese kwehupenyu kwaungafunga nezvako. Madimikira anogona kufadza munhu ane makore gumi nemasere uye anogona kukurudzirawo ane makore makumi matanhatu nemashanu ekuzvarwa nekuti zvese izvi zvekutaura hazvina nguva uye zvinoshanda.
Iyo webhusaiti inokubvumira kuti utsvage chinyorwa uye ichibva yavhura iwe kuunganidzwa hukuru hwekutora kubva kuvanhu pasi rese pane chinyorwa chakasarudzwa. Saka, ramba uchiongorora, kufemerwa, uye kukurudzira vamwe zvakare!
Kana iwe ukawana chero mazwi (a) aunoda kutevedzera uye / kana kushandisa ivo pane yako blog / webhusaiti kana chero kupi zvako, chingave chiitiko chakanaka kupa hunhu kune ino webhusaiti.
Ndokumbirawo kuti muverenge chinotevera chirevo mushure mekushandisa iyi webhusaiti.
Uku kudzvinyirira kunotonga mashandisiro ako Quotespedia.org. Nekushandisa iyi webhusaiti, iwe unogamuchira iyi disclaimer yakazara. Kana iwe usingabvumirani nechero chikamu cheichi chirevo, nemutsa usashandise Quotespedia.org kana chero yakabatana mawebhusaiti, zvivakwa, kana makambani. Isu tinochengeta kodzero yekugadzirisa aya mazwi chero nguva. Iwe unofanirwa, saka, kutarisa kumashure nguva nenguva kuti shanduko. Nekushandisa iyi webhusaiti mushure mekutumira chero shanduko, iwe unobvuma kugamuchira shanduko idzodzo, ungave wadziongorora kana kwete.
Mifananidzo yakashandiswa paQuotespedia.org inotorwa kubva pamawebhusaiti emahara evaridzi, shamwari, uye vashandisi, uye vanofungidzirwa kuti vari mu "yeruzhinji domain". Isu tinovaunganidza, vadzoreredze, uye vovaisa mumakamara. Kana iwe uri muridzi akakodzera chero chero mufananidzo uye uchida kuti ubviswe ndapota email isu uye isu tichizozvibvisa zvakateerana zvinodiwa.
Nhamba dzinoratidzwa pane ino webhusaiti ndezvekudzidzisa chete uye zvinokurudzira zvinangwa uye zvinowanikwa kuti ushandiswe pachako uye ndezvemahara. Iko hakuna mitengo yakavanzika inobatanidzwa kana uchirodha pasi.